Xukuumada Oo Ka Jawaabtay Eedaymo Xildhibaan NacNac Ku Ganay Radio Hargeysa
Thursday November 07, 2019 - 16:51:18 in News by G. Good
Waxaanu yidhi "Waxaan ka jawaabayaa arrin dhacday bishan labadeedii, oo ku saabsanayd idaacadda Radio Hargaysa, oo uu ka hadlay nin ka mida golaha Wakiiladda, oo la yidhaahdo xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye (Nac-nac). Arrintaaasi waxay si gaara uga hadlaysay Radio Hargaysa, oo uu eed weyn u soo jeediyay xildhibaanku.
"ALLE ha u naxariistee taliyihii ciidamadda booliska Somaliland C/laahi Fadal Iimaan, ayaa tacsidiisii lagu jiray. Runtii si weyn ayaanu uga xunnahay, anagoo soo gudbinaynay tacsidii ay u dirayeen madaxweynaha, goleyaasha qaranka, ta dadweynaha iyo ta masuuliyiinta kale-ba” ayuu yidhi Xasan.
Isagoo hadalka sii watayna waxa uu yidhi "Waxaan filayaa in xildhibaanku Radio Muqdisho dhegaystay. Qaranku wuxuu leeyahay idaacad u gaara quraanka oo tacsidu ka socotay, muu dhegaysan mana uu xusin, idaacaddda quraanka ee Radio Hargaysa, oo tacsidu ka baxaysay”.
Balse ay tahay mid uu jideeyay dastuurka Somaliland, waxaanu yidhi "Arrimaha caynkaas ah anagu shaqo kuma lihin, ama wasiirku shaqo ku leeyahay ama gaasimuhu. Waa arrin dastuuri ah. maalaha munaasibadaha qaranka la xusayo iyo tacsiyadahaba dastuurka ayaa lagu qoraa, isaga ayaan agolaha Wakiiladda ka tirsan, iyaga ayaana looga fadhiyay in ay dejiyaan oo ay keenaan.
Waxaanu yidhi "Ciidanka booliska Somaliland waxaa soo maray saraakiil badan oo intoodii badnayd ay geeriyoodeen, oo uu ugu danbeeyay C/laahi Fadal. Waxaa geeriyooday Maxamed Saqadhi Dubad, Cilmi Rooble Fure, Maxamed Cige, Dhegaweyne, C/qaadir Muuse, Xuseen Axmed Guuleed (Xuseen-dheere), dhamaan way geeriyoodeen.